Uyenza njani iNgena okwethutyana kwi-WordPress ngekhonkco elithe ngqo | Martech Zone
Uyenza njani iNgena okwethutyana kwi-WordPress ngekhonkco elithe ngqo
Ndiye ndasebenza kumakhulu abathengi ngeWordPress, ukuphuhlisa imixholo, iiplagi, ukudityaniswa, njl njl. Ubukhulu becala, umxholo ovavanyiweyo novavanyiweyo okanye iplagin enomlinganiselo omkhulu kunye nodumo lusebenza ngokungenamthungo kwisiza somthengi. Kodwa, rhoqo, iplagin okanye umxholo uya kuphosa i-bug okanye unokude uthabathe indawo ngokupheleleyo.
Kule veki, bendinomcimbi kwindawo yethu yeshishini apho ukuhlaziya i Elementor Plugin (endiyincoma kakhulu njengomakhi wephepha elibonakalayo) uqalise inkqubo yokuhlaziya izicwangciso kwisiseko sedatha. Inkqubo yaqala kodwa ayizange igqitywe… kwaye ukuba ndicofe kuyo ukuze ndiyigqibe ngesandla, indawo yam iya kuba nempazamo.
Ndiqhagamshelane neqela lenkxaso e-Elementor kuba kwakungekho nto ndinokuyenza ukulungisa ingxaki. Baphendula ngokukhawuleza kwaye bacela ukufikelela okwexeshana kwindawo kunye neemvume zolawulo kwaye bacebisa Ukungena okwethutyana Ngaphandle kweplagi yegama lokugqithisa, iplagi ephuhliswe yi Gcina iiNkqubo iqela.
Ukungena okwethutyana ngaphandle kwePlugin ye-WordPress yePasssword
Kwimizuzu nje embalwa, ndalayisha kwaye ndavula iplagin, kwaye ndine-URL ethe ngqo yokungena kwitikiti elibanike ukufikelela abaludingayo. Eyona nto ingcono, ayifuni ukubhaliswa kwicala labo konke konke.
Le yiplagi emnandi kakhulu kuba ayifuni ukuba ubuye umva kwaye ucime iakhawunti oyenzileyo, ikwenza ube sesichengeni seqela leakhawunti ezingasetyenziswanga ezinokuthi zibe namagama ayimfihlo alula ukuziqhekeza.
I-plugin yiyo yonke into oyifunayo, ibonelela ngezi mpawu zilandelayo:
Yenza unlimited ukungena okwethutyana
Yenza ukungena okwethutyana nangayiphi na Indima
Akukho gama lomsebenzisi kunye negama lokugqitha ezifunekayo. Ngena nje nge ikhonkco elula
Cwangcisa ukuphelelwa kweakhawunti. Ke, umsebenzisi wethutyana akakwazi ukungena emva kwexesha lokuphelelwa
Iinketho ezahlukeneyo zokuphelelwa lixesha njengosuku olunye, iveki enye, inyanga enye, kunye nezinye ezininzi. Kwakhona, misela umhla omiselweyo
Phinda uqondise umsebenzisi kwiphepha elithile emva kokungena
Cwangcisa ulwimi kumsebenzisi wethutyana
bona i ugqibele ukungena ngexesha yomsebenzisi wethutyana
khangela ukuqaphela Umsebenzisi wexeshana ufikelele kwisicwangciso sakho
Ndichukumisekile kakhulu yiplagin endiye ndongeze kuluhlu lwethu Iiplagi ezigqwesileyo zeWordPress kwindawo yeshishini lakho.
Ukungena okwethutyana Ngaphandle kwePlugin yegama lokugqithisa
Ukubhengezwa: Ndisebenzisa ikhonkco lam lokudibana Mlawuli kweli nqaku.
tags: yenza ikhonkco lokungenayenza ukungena kwethutyanaixesha lokungena eliphelelwayokwenziwa kanjaniUkuphelelwa kwexesha lokungenaiifowuni zokusebenzaingxaki wordpressukungena ngemvume komsebenzisiWordPressloginpress loginukhuseleko kwilizwi